ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်မျက်နှာပေါင်းတင် ချေးချွတ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ် နှင့် မျက်နှာချေးချွတ် ပေါင်းတင်ကြမယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် အလယ်သားကို ခြစ်ချထားပြီး အနည်းငယ်ချန်ထားပါ ။ ဆနွင်း မှုန့် ( သို့ ) ကော်ဖီမှုန့် အနည်းငယ်ပုံပါအတိုင်းတင်ပြီး ကျန်အသားအနည်းငယ်ကိုခြစ်ပြီးရောသမလိုက်ပါ ပြီးလျှင်မျက်နှာပြင်မှာသုတ်လိမ်းပြီးအသာအယာပွတ်ပြီးချေးချွတ်သန့်စင်ပါ ။ ရေဆေးချပြီး ခြစ်ထားသေားအရည်ကြည်များကိုသုတ်လိမ်းခြောက်သည်ထိထားပြီးရေပြန်ဆေးပါ မယုံနိင်အောင်တင်းရင်းဝင်းပလာတဲ့ သင့်မျက်နှာအလှကိုအံ့သြသွားရမှာပါ ရှားစောင်းလက်ပတ် အစွမ်း ရှားစောင်းလက်ပတ် (တစောင်းလက်ပတ်) သည် ချဉ်ဆီကို တိုးပွားစေသည်။ အဆိပ်ကို ပယ်၏။ အရေပြားအနာကို ပျောက်စေသည်။ ဆီးသက်စေ၏။ ကိုယ်အရေပြားရောဂါကို ကာကွယ်စေသည်။ ဦးနှောက်ပူခြင်းကို အေးစေနိုင်သည်.။ ရေယုန်နာ ယားနာတို့ကို ပျောက်စေနိုင်သည်။ မျက်စိရောဂါ အမျိုးမျိုးကိုလည်း ပျောက်စေသည်။ အနာကို ကျက်စေသည်။ သွေးထွက်ခြင်းကို …
ဘုရားပန်း မညှိုးမှ . . . အစွမ်းတိုးမယ်
ဘုရားပန်း မညှိုးမှ . . . အစွမ်းတိုးမယ် လူအများစုရဲ့သဘာဝ ၊ အများစုရယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ၊“နတ် ကိုးကွယ်မှု အားသန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်”တွေကဘုရားပန်းသာ ညှိုးချင် ညှိုးပါစေ။နတ်ပန်းတော့ အညှိုးမခံနိုင်ဘူး။ဘုရားစင်မှာ ဆွမ်းခဲဖွယ်ချိုချဉ်ရသာ မရှိရင်သာနေမယ်။နတ်ရှေ့မှာ အုန်းသီးဆိုလည်း အလုံးလိုက်၊ငှက်ပျောသီးဆိုလည်း အဖီးလိုက်။ ယောဂီတို့ အိမ်တွင်းရေး မသာယာချင်ဘူးလား။(သာယာချင်တယ်။)သာယာချင်တယ်ဆိုရင် ဘုရားပန်း မညှိုးပါစေနဲ့။ ဘုရားပန်းညှိုးပြီဆိုရင်တော့ အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ ကွာမယ်။အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့၊တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အဆင်မပြေ ၊စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေဖြစ်ကြမှာပဲ။လုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်း စီးပွါးရေးတွေလည်းအဆင်ပြေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဂါထာတွေ၊ မန္တာန်တွေ အမြှုပ်ထွက်အောင် မရွတ်ချင်နေပါ။ဘုရားပန်း အမြဲတမ်း လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်အောင် ထားမယ်၊သောက်တော်ရေချမ်းလေးကိုလည်း အမြဲတမ်းအေးနေအောင်ထားမယ် ဆိုရင်အိမ်တွင်းရေးလည်း အေးချမ်း၊စီးပွားလမ်းလည်းဖြောင့် ၊အစစအရာရာ အဆင်ပြေမှာပါ။ သောက်တော်ရေ တနေ့ …
“ရှယ်ထားနော် တစ်သက်လုံးအသုံးဝင်မယ့် ဆေးနည်းပေါင်းစုံတွေ”
“ရှယ်ထားနော် တစ်သက်လုံးအသုံးဝင်မယ့် ဆေးနည်းပေါင်းစုံတွေ” မိတ်ဆွေတို့ရေ ဒီpostလေးကိုရှယ်ထားခြင်းဖြင့် မိမိတို့လိုအပ်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်ဖို့အချိန်မရွေးဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ချောင်းဆိုးလျှင်.ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင်း ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ ။ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ..ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှအသာအယာသပ်ချပါ ။နှာပိတ်သော်..ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ ။တက်လျှင်.ဆင်ငိုမြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည် ။ ရေငတ်ဝမ်းကျ ..ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်းကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ ။ကင်းထိုးသော်.ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာ ငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ ။ကြို့ထိုးလျှင်ကြက်သွန်းနီကိုထန်းလျှက်နှင့်နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား ။ခရုသင်း..ကျည်းသီးဆန်ကိုဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာစားရပါသည် ။ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လျှင်.ကွိတျမှနျရှကျယိုထိုူးစားပြောကျ၏ ။ခါးနာ ခါးကိုက်ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည်လိမ်းပေးပါ ။ငှက်ဖျားထလျှင် ..မြင်းခွာရွက်ရည်ကို ငရုပ်ကောင်းနှင့်အမျှစီကြိတ်၍ သောက်ပါ ။ခံတွင်းပျက်လျှင်..ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပေးပါ ။ …
သွားတိုက်ဆေးဘူးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်သတိမထားမိတဲ့ တလွဲ
သွားတိုက်ဆေးဘူးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်သတိမထားမိတဲ့ တလွဲ သွားတိုက်ဆေးဘူး အောက်ခြေ လေးမှာ အရောင်ပါတဲ့ လေးထောင့်လေး ကို သတိပြုကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအမှတ်အသား ထဲမှာဆိုရင် အစိမ်း၊ အပြာ၊ အနီ (သို့) အနက် စတဲ့ အရောင်တွေ ပါတတ်ပါတယ်။ ဒါကို လူအများစုက ဒီ သွားတိုက်ဆေး ထဲမှာ အဆိပ် ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း ဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာကို ပြတဲ့ လျှို့ဝှက် သင်္ကေတလို့ ထင်ကြပါတယ်။ အင်တာနက် ဝက်ဆိုက် တွေထဲက ဆောင်းပါးတွေက ဒီအရောင်တွေက သွားတိုက်ဆေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တွေရဲ့ အရေအတွက် ကို ညွှန်ပြနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ ဆောင်းပါးတွေမှာ …
ငွေကြေးမရှိသော်လည်း နေ့စဉ်လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူဒါန ( ၇ ) မျိုး
ငွေကြေးမရှိသော်လည်း နေ့စဉ်လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူဒါန ( ၇ ) မျိုး ငွေကြေး မရှိသော်လည်း နေ့စဉ် လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူဒါန ( ၇ ) မျိုး အခါတပါး၌ လူငယ်တစ်ယောက်သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ အကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အရာကိုပဲ လုပ်လုပ် မအောင်မမြင် ဖြစ် နေ ပါ သည် ။ ။ ။ ။ ။ အဘယ်ကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါ သနည်းဟု မေးလျှောက်သည် ။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက အသင်သည် အလှူဒါန မပြုတတ်၍ ဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားတော်မူသည်။ “ ငွေကြေးတစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ မရှိသောဆင်းရဲသား ကျွန်ုပ်အဖို့ …
မိန်ကလေးတစ်ယောက် ရူးရူးမူးမူး ချစ်နေမိပြီဆိုရင်
မိန်ကလေးတစ်ယောက် ရူးရူးမူးမူး ချစ်နေမိပြီဆိုရင် Relationship တစ်ခုစတင်ချိန်မှာ ယောကျာ်လေးတွေရဲ့ အချစ်က ၁၀၀% ဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေအချစ်ကတော့ ၁၀% လောက်ပဲရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်က ၁၀% ကနေ တစ်ရိပ်ရိပ် တိုးတက်လာ တတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အဲ့ဒီယောကျာ်လေး တစ်ယောက်အပေါ်ကိုပဲ အချစ်တွေအားလုံးပုံအပ် တတ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် သင့်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်ပြီဆိုရင် ဒီအချက်တွေပြု လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) အချိန်တိုင်း အတူတူရှိချင်လာမယ် သင့်နဲ့ အတူရှိနေရတဲ့အချိန်ဟာ သူမအတွက်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်လေးလို့ ခံစားလာရပါလိမ့်မယ်။ အတူတူမရှိရင်တောင်မှ အွန်းလိုင်းပေါ်က Video Call ခေါ်ပြီး မျက်နှာလေးမြင်ချင်လာမိမယ်။ မိုးလင်းတာနဲ့ သင့်အသံလေးကိုကြားချင်မယ်။ …
အသည်းကွဲရင် ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးက တကယ်ရှိပါတယ်…?
အသည်းကွဲရင် ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးက တကယ်ရှိပါတယ်…? ငါဒီအချိန်ကြီး ကိုရအောင်ကျော်ဖြတ် မယ် ဆိုတဲ့ “ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်” ရယ်၊ ဘာအခက် အခဲပဲ ရှိရှိ တကယ် ကိုကြိုး စားမယ် ဆို တဲ့ “သတ္တိ” ရယ်ရှိ ရင်ရပြီ ။ ကြိုးစားနေ တဲ့အချိန် မှာ “သူပြန် မလာ ခဲ့ရင်တို့၊ သူပြန်လာ ပါ့မလား” တို့ဆို တဲ့အတွေးတွေ ထက် “ငါဘယ် လိုနေရင် ပိုအဆင်ပြေ လာမလဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ကိုပိုပြီးတွေးကြည့် ပါ ။ လူတစ်ယောက် ကိုမေ့ဖို့က ချက်ချင်းကြီ းဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ မမေ့သွာ းဘူး …
ဖိနပ်တစ်ရံရဲ့ အလှူဒါနကြောင့် သေရွာမှပြန်လာသူ
ဖိနပ်တစ်ရံရဲ့ အလှူဒါနကြောင့် သေရွာမှပြန်လာသူ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ ရုတ်တစ်ရက် လှူလိုက်တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံအလှူကြောင့် သေပြီးနောက် ငရဲကနေလွတ်ပြီး သေရွာမှပြန်လာသူ တစ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စေတနာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နားမှာပေါ့ ဆရာဝန်တွေ ပျာယာခတ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း စက်ကိရိယာ အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိကြ နှိပ်ကြပေမဲ့ လုံးဝ နာကျဉ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ပကတိ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးခြင်း အရသာလိုအေးချမ်းလိုက်တာ။ ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရုပ် ခန္ဓာကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအခန်းအပြင်ဘက်ကို ထွက်လိုက်တော့… ဟင်…ခုံတန်းလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ ကျွန်တော့်သားလေး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ သောကတွေ အပြည့်နဲ့ပါလား မျက်ရည်တွေစီးကျနေတဲ့ ဇနီးသည်နဲ့ သားလေးဆီကို သွားမလို့ ခြေလှမ်းလိုက် ချိန်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ အင်အားတစ်ခုက ဆွဲယူလိုက်သလို …
သမီးက ကလေးလေး ရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က (၁၆) နှစ်ကောင်မလေး ရဲ့သနားစရာ
သမီးက ကလေးလေး ရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က (၁၆) နှစ်ကောင်မလေး ရဲ့သနားစရာ ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေတာပေါ့ ”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက … ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း … နွားအို မြက်နု ကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း ” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေပြန်တယ် ! ကောင်မလေးကလည်း “ ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ် … မီးက တကယ် ခလေး ရှိပါသေးတယ် ” ဆိုပြီး … အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆိုနေတော့ … ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း … “ …
အကုသိုလ် ကင်းကင်းနဲ့ အိမ်ထဲကြွက်မလာအောင်လုပ်သော နည်းလမ်းကောင်း
အကုသိုလ် ကင်းကင်းနဲ့ အိမ်ထဲကြွက်မလာအောင်လုပ်သော နည်းလမ်းကောင်း သင့်အိမ်ကို ကြွက်မလာအောင် ဒီနည်းကလည်း စာဖတ်ရင်း ရလာတဲ့ ဗဟုသုတပါ ။ စာမဖတ်၊ ဗဟုသုတ မရှာခဲ့ရင် ခုလို ကူညီနိုင်မှာမ ဟုတ် ။ ယခုတင်ဆက်ပေးသော အကြောင်းအရာလေးကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုပါရစေ ။ လူကြီး မင်းတို့ရဲ့ အားပေးမှုတျွေက ကျွန်တော်၊ကျွန်မတို့အတွက် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက် ခွန်းအားသစ်တွေရရှိပါတယ် ။ အစားအစာ ရှိ တဲ့ နေရာမှာ ကြွက်တွေ ပျော်ကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် အစားအစာ လွယ်ကူတဲ့ နေရာမျိုးဆို မိသားစုလိုက် အုပ်လိုက်ကျင်းလိုက် နေတတ်ပါတယ် ။ကြွက်က လူတွေအတွက် ကျန်းမာ ရေးကို …
Previous 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 305 Next